Fitantanana sy fomba fiasa: miroso amin’ny fanovana ny METFP | NewsMada
Fitantanana sy fomba fiasa: miroso amin’ny fanovana ny METFP
Sahy manova. Manentana ny rehetra hanova ny fomba fijery manoloana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana ny minisitra Rahantanirivina Vavitsara Gabriella. Nambarany fa tsy tokony ho faralahy na ho safidy farany na koa natao ho an’ireo very eny anelanelany eo amin’ny fanabeazana ny fampianarana teknika. “Tokony hanova izany toe-tsaina izany ny rehetra. Manomboka amin’ny raiamandreny sy ny ankizy izany, ankoatra ny fanovana efa entin’ny minisitera”, hoy izy. Nohitsiny fa fotoana izao hanomezana lanja sy hasina izany fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa (METFP) izany. Mila izany ny sehatra rehetra, hialana amin’ny mety ho fanafarana teknisianina na manampahaizana vahiny, tahaka ny efa niainana tamin’ny fanafarana mpanao “soudure” avy any ivelany.
Etsy an-daniny, efa izoran’ny minisitera koa ny fanitsiana ireo rafitra isan-tokony sy ny fanovana fomba fiasa.
Maherin’ny 400 000 ireo tanora nahavita fiofanana
Manampy ireo ny firosoana amin’ny fanovana eo amin’ny METFP amin’ny fanomezana vahana ny filana eny anivon’ny faritra, iarahana amin’ny sehatra tsy miankina, amin’ny fanomezana asa sy fanofanana ny tanora. Ny fitsinjarana ny vola hatreny anivon’ny isam-paritra sy ny EETFP. Ny “digitalisation”, ny fampifandraisana “interconnexion” ireo rafitra ary ny fampitaovana hatreny ifotony.
Tsiahivina fa maherin’ny 400 000 ireo tanora nahavita fiofanana sy afaka niditra eo amin’ny tsenan’ny asa, ny taona 2020-2021. Mametraka tanjona hatrany amin’ny 700 000 mahery ho an’ity taona ity. Manampy ireo ny hanorenana lysea teknika (LT) miisa sivy amin’ny faritra sivy. 12 kosa ireo foibe fanofanana (CFP) amin’ny faritra 12 koa.